Mampitony fivalanana, kohaka…ny ravin-goavy
Mahasitrana aretina maro ny ravin-goavy noho ireo singa mahasoa ao anatiny toy ny “flavonoïdes” ny “polyphénols”, ny “tanins” … Izany no mahatonga azy mitsabo sy manampy hisoroka aretina maro toy ny hoe : misoroka aretin-koditra, mitsabo aretin-kibo toy ny mivalana, mampihena ny tahan’ny siramamy sy ny kolesteroly any anatin’ny rà, miady amin’ny kohaka sy […]
Ody fanaintainana tsotra kely atao ao an-trano
Tsy tsara loatra ny miankin-doha amin’ny fihinanana fanafody raha toa ka fanaintainana na aretina tsotsotra no mahazo. Sery vitan’anamalaho tokoa ka tsy hamonoana vantotra akoho. Karazana akora sy sakafo 7 mahavonjy tampoka ao anatin’ny fanaintainana ireto atoro anao ireto. 1. Silaka jirofo : atao ao anatin’ny nify misy lavaka ka manaintaina be. 2. Tantely […]
Volon-katsaka, mampitony « infection urinaire »
Mahasoa ny fahasalamana ny volon-katsaka. Manadio ny anaty izy satria mampivalan-drano. Mety tsara ho an’ireo izay voan’ny « infection urinaire » ny misotro azy. Atoro anao ny fomba fikarakarana azy mba hahazoana ny tombony rehetra avy aminy Akora ilaina : Rano 1 litatra Tantely Ranom-boasarimakirana Volon-katsaka 4 sf Fikarakarana : Atao ao o anaty […]
Fitsaboana cancer nahasitrana : ravina corrosol
Ravina corrosol 10 lena na maina ampangotrahana@ rano 3 vera Rehefa 1 vera sisa de bataina Sotroina indroa isanandro mandritra ny 1 volana . 2 herinandro dia mahita vokany Raha tena cancéreux dia 3 volana misesy misotro foana. Raha tena phase final de extrait mihintsy no atao izany hoe mankany ampotony dia maka raviny lena […]
Fomba itsapana nono, isorohana ny homamiadana
Ambara ombieny ombieny fa isan’ireo aretina tena mahafaty vehivavy voalohany eto amintsika ny homamiadan’ny nono. Aleo misoroka toy izay mitsabo, ka isan’ireo fisorohana io areti-mandoza io ny « auto-palpation des seins », na fitsapana ny nono samy irery. Hijerena sao misy mivonto Antoka mampitombo ny taha hahasitranan’ny homamiadan’ny nono ny fanaovana « auto-palpation des […]
Atao ahoana raha voan’ny Goatra?
1)-Ny Goatra dia fivontosana hita eo amin’ny tenda afovoany. 2)- Tsy fahampian’ny IODA no mahatonga io. 3)- Tsy manaranaka ny Goatra, fa mitovy ny sakafo hoanin’ny fianakaviana iray, 4)- Ny haingana indrindra dia sira misy IODA ampiasaina,misoratra eo amin’ny fonosana izany. 5)- Ny sakafo ahitana azy indray:Ny karazana trondro rehetra! Indrindra ny avy any amin’ny […]
Menaka oliva miaro amin’ny homamiadan’ny nono sy ny prostate
Tsara ho an’ny olona voan’ny diabeta -mahatsara ny fitadidiana(memoire) Ny vehivavy mihoatra ny 45 taona dia entanina hihinana ity menaka oliva ity. Manamafy ny taolana sy mahafaka ny aretina mpahazo ny vanin-taolana. Mahatsara volo,mampamiratra azy(aloan’ny hanasana loha dia hosory menaka oliva,zay vao sasao @ shampoing mahazatra anao). Maka menaka oliva antsasaky ny kopy Ranona voasarimakirana […]